Mankanesa aty amiko - Fiangonan'Andriamanitra manerana izao tontolo izao Soisa
haino aman-jery > Mifantoha amin'i Jesosy > Mifantoha amin'i Jesosy 2020-01 > Mankanesa aty amiko
I Emory Grace zafikelinay telo taona dia mahaliana ary mianatra haingana be, saingy toa ny ankizy rehetra dia manana fahasahiranana amin'ny fampahafantarana ny tenany izy. Rehefa miresaka aminy aho dia mibanjina ahy izy ary mieritreritra ny tenako: Hitako ny mihetsika ny vavanao, maheno teny aho, nefa tsy hitako izay tianao holazaina amiko. Avy eo dia nanokatra ny sandriko aho ary niteny hoe: Mankanesa at me amiko! Nihazakazaka izy nitady ny fitiavany.
Mampahatsiahy ahy ny fony mbola kely ny rainy. Nisy fotoana tsy azony noho ny tsy fahampian'ny fampahalalana ilainy ary amin'ny toe-javatra hafa dia tsy nanana traikefa na fahamatorana ho takatra fotsiny izy. Hoy aho taminy: tsy maintsy matoky ahy ianao raha tsy izany dia ho azonao any aoriana. Rehefa nilaza izany teny izany aho dia tsaroako foana izay nolazain’Andriamanitra tamin’ny alalan’i Isaia mpaminany hoe: “Ny fihevitro tsy fihevitrareo, ary ny lalanareo tsy mba lalako, hoy Jehovah, fa tahaka ny hahavon’ny lanitra noho ny tany no hahavon’ny lalako. ambony noho ny lalanareo sy ny fihevitro noho ny fihevitrareo » (Isaia 55,8- iray).
Mampahatsiahy antsika Andriamanitra fa manana ny zavatra rehetra izy. Tsy mila azontsika ny antsipiriany be pitsiny, fa afaka matoky isika fa fitiavana izy. Tsy ho takatsika tanteraka ny fahasoavan'Andriamanitra, ny famindram-po, ny famelan-keloka feno ary ny fitiavana tsy misy fepetra. Lehibe lavitra noho ny fitiavana azoko omena ny fitiavany; tsy misy fepetra izany. Midika izany fa tsy miankina amiko velively. Andriamanitra dia fitiavana. Tsy Andriamanitra irery no tia sy mampihatra izany fa izy kosa dia olona tia olona. Ny fangoraham-pony sy ny famelankeloka dia feno - tsy misy fetra - dia nofafany ary nesoriny ny fahotany lavitra ny atsinanana tsy lavitra ny andrefana - tsy misy tadidy. Ahoana no anaovany an'izany Tsy fantatro; Lavitra ny lalako ny lalany ary midera azy aho. Manoro antsika fotsiny izy hanatona azy.
Emory, ny zafikelinay mety tsy hahatakatra ny teny rehetra naloaky ny vavako, fa ny fahazoany azy tsara rehefa manokatra ny sandriko aho. Fantany fa tia azy i Dadabe, na dia tsy azoko atao aza ny manazava ny fitiavako satria izao fotoana izao dia avo ny saiko mihoatra ny sainy. Toy izany koa amin'Andriamanitra. Ny fitiavany antsika dia naseho amin'ny fomba izay tsy takatry ny saintsika.
Tsy azonao ny zavatra rehetra nahatonga an'i Jesosy ho olombelona sy ny dikan'ny fiainany, ny fahafatesany ary ny nitsanganany tamin'ny maty. Fa toa an'i Emory, fantatrao tsara hoe inona ny fitiavana ary inona ny dikan'izany rehefa manokatra ny sandriny i Jesosy ary miteny hoe: "Mankanesa at me amiko!"